Ramba Wakaparadzana Nenyika | Rudo rwaMwari
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Altai Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Japanese Jula Kabiye Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Kosraean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mixe (North Central) Mizo Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Venda Vezo Wallisian Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Tingaramba Sei Takaparadzana Nenyika?
1. Jesu akataura ataurazve nezvei pausiku hwake hwokupedzisira pasi pano asati aurayiwa?
PAUSIKU hwake hwokupedzisira pasi pano asati aurayiwa, Jesu akataura zvairatidza kuti aiva nehanya zvechokwadi neramangwana revateveri vake. Akatonyengetera nezvenyaya iyi, achiti kuna Baba vake: “Handikukumbirii kuti muvabvise munyika, asi kuti muvatarisire nokuda kweakaipa. Havasi venyika, seni ndisiri wenyika.” (Johani 17:15, 16) Achikumbira nomwoyo wose, Jesu akaratidza kuti aida vateveri vake zvakadzama uye akaratidza kukosha kwemashoko aakanga ambotaura manheru iwayo okuti: “Hamusi venyika.” (Johani 15:19) Zviri pachena kuti Jesu aikoshesa zvikuru kuti vateveri vake varambe vakaparadzana nenyika.
2. “Nyika” yaitaurwa nezvayo naJesu chii?
2 “Nyika” yaitaurwa nezvayo naJesu inoreva vanhu vakaparadzana naMwari, vanotongwa naSatani, uye vakaitwa varanda vepfungwa yokungoda zvakanakira ivo chete uye yokuzvikudza iyo inobva kuna Satani. (Johani 14:30; VaEfeso 2:2; 1 Johani 5:19) Zvechokwadi, ‘kuva shamwari yenyika iyoyo kuzviita muvengi waMwari.’ (Jakobho 4:4) Asi vose vanoda kuramba vari murudo rwaMwari vangaparadzana sei nenyika ivo vachigara mairi? Tichakurukura nzira shanu dzinoti: kuramba takavimbika kuUmambo hwaMwari hunotungamirirwa naKristu uye kusatsigira zvematongerwo enyika, kuramba mafungiro enyika, kuva nomwero pamapfekero nokushambidzika, kuva neziso rakanaka, uye kupfeka nhumbi dzokurwa nadzo dzomudzimu.
KURAMBA TAKAVIMBIKA UYE TISINA KWATINOTSIGIRA
3. (a) Paaiva pasi pano Jesu aiona sei zvematongerwo enyika? (b) Nei zvichigona kunzi vateveri vaJesu vakazodzwa vanoshanda sevamiririri? (Taurawo zviri mumashoko omuzasi.)
3 Panzvimbo pokuita zvematongerwo enyika zvemazuva iwayo, Jesu akaisa pfungwa dzake pakuparidza Umambo hwaMwari, hurumende yokudenga yaaizova Mambo wayo. (Dhanieri 7:13, 14; Ruka 4:43; 17:20, 21) Ndokusaka akazotaura ari pamberi paGavhuna weRoma Pondiyo Pirato achiti: “Umambo hwangu hahusi hwenyika ino.” (Johani 18:36) Vateveri vake vakatendeka vanotevedzera muenzaniso wake nokuva vakavimbika kuna Kristu noUmambo hwake uye nokuzivisa nyika nezvahwo. (Mateu 24:14) Muapostora Pauro akanyora kuti: “Tiri nhume dzinomiririra Kristu . . . Sevamiririri vaKristu tinokumbira kuti: ‘Yananiswai naMwari.’” *—2 VaKorinde 5:20.
4. VaKristu vose vechokwadi vanoratidza sei kuti vakavimbika kuUmambo hwaMwari? (Ona bhokisi rakanzi “ VaKristu Vokutanga Vainge Vasina Kwavanotsigira.”)
4 Sezvo vamiririri vedzimwe nyika vachimiririra nyika dzavo dzinozvitonga, havapindiri munyaya dzomunyika dzavanenge vari; vanoramba vasina kwavanotsigira. Asi vanongotsigira hurumende yenyika yavo. Ndizvo zvinoitawo vateveri vaKristu vakazodzwa, avo vari “vagari vokumatenga.” (VaFiripi 3:20) Kushingaira kwavo kuparidza Umambo, kwatobatsira mamiriyoni ‘emamwe makwai’ kuti ‘ayananiswe naMwari.’ (Johani 10:16; Mateu 25:31-40) Ava vemamwe makwai vanoshanda sevatevedzeri vevamiririri vaKristu vachitsigira hama dzaJesu dzakazodzwa. Semakwai akabatana anotsigira Umambo hwaMesiya, mapoka acho ose ari maviri anoramba asina kwaanotsigira mune zvematongerwo enyika.—Verenga Isaya 2:2-4.
5. Ungano yechiKristu yakasiyana papi nerudzi rwevaIsraeri, uye musiyano iwoyo unooneka sei?
5 Kuvimbika kuna Kristu handicho chikonzero choga chinoita kuti vaKristu vechokwadi vasava nekwavanotsigira. Kusiyana nevaIsraeri avo vaiva nenyika yavaive vakapiwa naMwari, isu tiri hama dzinowanika munyika yose. (Mateu 28:19; 1 Petro 2:9) Saka kana tikatsigira mapato ezvematongerwo enyika, hatizotauri shoko roUmambo takasununguka uye kubatana kwedu kwechiKristu kunokanganisika zvikuru. (1 VaKorinde 1:10) Uyezve munguva yehondo tinenge tava kurwa nevamwe vatinonamata navo, isu tichifanira kuvada. (Johani 13:34, 35; 1 Johani 3:10-12) Ndosaka Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vasashandisa mapakatwa. Akatovaudza kuti vade vavengi vavo.—Mateu 5:44; 26:52; ona bhokisi rakanzi “ Ndiri Kuramba Ndisina Kwandinotsigira Here?”
6. Kuzvitsaurira kwako kuna Mwari kunoita kuti uite sei kuna Kesari?
6 SevaKristu vechokwadi, takatsaurira upenyu hwedu kuna Mwari, kwete kumunhu upi zvake, sangano ripi zvaro revanhu, kana kuti nyika ipi zvayo. Pana 1 VaKorinde 6:19, 20 panoti: “Hamusi venyu pachenyu, nokuti makatengwa nomutengo.” Saka kunyange zvazvo vachipa “Kesari” zvinhu zvake zvakadai sorukudzo, mitero uye kuzviisa pasi zvine mwero, vateveri vaJesu vanopa “zvinhu zvaMwari kuna Mwari.” (Mako 12:17; VaRoma 13:1-7) Izvi zvinosanganisira kumunamata kwavanoita, kumuda nomweya wose, uye kumuteerera nokuvimbika. Vakagadzirira kufira Mwari wavo, kana zvasvika pakadaro.—Ruka 4:8; 10:27; verenga Mabasa 5:29; VaRoma 14:8.
VAKRISTU VOKUTANGA VAINGE VASINA KWAVANOTSIGIRA
Mabhuku enyika ezvakaitika kare anopa uchapupu huri pachena hwokuti vaKristu vokutanga vairamba vasingatsigiri zvematongerwo enyika uye vairamba kuita zvehondo. Bhuku rinonzi The Beginnings of Christianity (Kutanga kwechiKristu) rinoti: “Vakatanga chiKristu vainyatsongwarira kuti vasambova nekamuitiro kakarerekera pakupindira mune zvematongerwo enyika zvepanguva iyoyo.” Bhuku rinonzi On the Road to Civilization (Kubudirira Kwakaita Zvinhu) rinotiwo: “ChiKristu chepakutanga chakanga chisinganyanyi kunzwisiswa uye chakanga chisingafarirwi nevaya vaitonga nyika yechihedheni. . . . VaKristu vairamba kuita mamwe mabasa aiitwa nezvizvarwa zveRoma. . . . Vakanga vasingadi kuva nezvigaro zvematongerwo enyika.”
Nezvemaonero aiita vaKristu vokutanga basa rechiuto, mumwe mufundisi wokuGermany anonzi Peter Meinhold anoti: “Zvaitorwa sezvisingaiti kuti munhu aive muKristu ave musoja.” Murondedzero yake yokuongorora kana chiuto chaipindirana nokutenda kwechiKristu, yaiva nemusoro unoti “An Inquiry Into the Accordancy of War With the Principles of Christianity,” munyori wezvechitendero Jonathan Dymond akanyora kuti, kwenguva yakati kuti pashure porufu rwaJesu, vateveri vake “vairamba kuenda kuhondo; kunyange kana vaizoshorwa, kana kuiswa mujeri, kana kuurayiwa.” Dymond akawedzera kuti: “Ichi ichokwadi chisingarambiki.” Mumwe munyori akati vaKristu vakazotanga kuva masoja “chiKristu pachakanga chatsauka.”
KURAMBA “MUDZIMU WENYIKA”
7, 8. “Mudzimu wenyika” chii, uye ‘unoshanda’ sei muvanhu vasingateereri?
7 Imwe nzira yokuti vaKristu varambe vakaparadzana nenyika ndeyokuramba mudzimu wayo wakaipa. Pauro akanyora kuti: “Takagamuchira, kwete mudzimu wenyika, asi mudzimu unobva kuna Mwari.” (1 VaKorinde 2:12) KuvaEfeso akati: ‘Makambofamba maererano . . . nenyika ino, maererano nomutongi wesimba remhepo, iwo mafungiro anoshanda zvino muvanakomana vasingateereri.’—VaEfeso 2:2, 3.
8 “Mhepo” yenyika kana kuti mudzimu, isimba risingaoneki rinoita kuti vanhu vasateerera Mwari richivakurudzira “kuchiva kwenyama nokuchiva kwemaziso.” (1 Johani 2:16; 1 Timoti 6:9, 10) Chinoita kuti mudzimu uyu uve ‘nesimba’ ndechekuti unokwezva nyama inotadza, hausi nyore kuona, haudzokeri shure, uye wakapararira semhepo. Uyezve ‘unoshanda’ muvanhu vasingateereri uchiita kuti zvishoma nezvishoma vave nounhu hunovengwa naMwari, hwakadai sokungoda zvakavanakira, kuzvikudza, kukara kunoratidza kusagutsikana, uye pfungwa yokusada kuudzwa nzira yokuzvibata nayo uye kupanduka. * Kana zvichitaurwa zviri nyore, mudzimu wenyika unoita kuti unhu hwaDhiyabhorosi hukure mumwoyo yevanhu zvishoma nezvishoma.—Johani 8:44; Mabasa 13:10; 1 Johani 3:8, 10.
9. Mudzimu wenyika ungapinda sei mumwoyo nomupfungwa dzomunhu?
9 Mudzimu wenyika ungagona kudzika midzi mumwoyo mako nomupfungwa here? Hungu, asi zvinoitika chete kana ukavarairwa. (Verenga Zvirevo 4:23.) Unogona kutanga kukunyengera zvisiri pachena, zvichida neshamwari dzinoita sevanhu vakanaka, asi idzo dzisingadi Jehovha. (Zvirevo 13:20; 1 VaKorinde 15:33) Iwe unogonawo kuva nemafungiro akaipa iwayo kuburikidza nemabhuku asina kukodzera, mifananidzo inonyadzisira kana kuti zvinobudiswa paIndaneti nevanhu vakaramba kutenda, kuvaraidzwa nezvinhu zvakaipa, uye mitambo yemakwikwi okunge muchaurayana. Tingatoti chero munhu upi zvake kana kuti chero chinhu chipi zvacho chinokurudzira mafungiro aSatani nenyika yake chinogona kutikanganisa.
10. Tingaramba sei mudzimu wenyika?
10 Tingaramba sei mudzimu wenyika unokuvadza toramba tiri murudo rwaMwari? Kana tikangoshandisa zvizere urongwa hwaJehovha hwokunamata uye tichigara tichinyengetera kuti atipe mudzimu mutsvene. Jehovha mukuru nokure kuna Dhiyabhorosi nenyika yakaipa iri musimba rake. (1 Johani 4:4) Saka zvinokosha zvikuru kuti tirambe tiri pedyo naJehovha kuburikidza nokunyengetera!
NDIRI KURAMBA NDISINA KWANDINOTSIGIRA HERE?
Rugwaro rwungakutungamirira: “Umambo hwangu hahusi hwenyika ino.”—Johani 18:36.
Ndingatsanangura sei kuti kusaruta mureza kunotova kunamata chifananidzo? *—Eksodho 20:4, 5; 1 Johani 5:21.
Pandinotsanangura mhemberero dzenyika dzandisingaiti, ndingaratidza sei kuti ndinoremekedza vamwe vasingatendi zvandinotenda?—1 Petro 3:15.
Nei ndisingatsigiri mapato ezvematongerwo enyika kana kuita chero zvine chokuita nechiuto?—Johani 13:34; 1 Johani 3:10-12.
KUVA NOMWERO PAMAPFEKERO NOKUSHAMBIDZIKA
11. Mudzimu wenyika unoita kuti vanhu vapfeke sei?
11 Chinhu chinoratidza kuti munhu ane mafungiro orudzii mapfekero, kushambidzika noutsanana. Munyika dzakawanda mapfekero ava kunyadzisa zvokuti mumwe mushamarari wepaterevhizheni akati zvichanetsa kuona mutsauko pakati pepfambi nedzisiri pfambi. Kunyange vasikana vasati vatomboyaruka vava kutandanisana nefashoni, yakazonzi nerimwe pepanhau “ndeyokunge vachafamba vakashama, isina kana mwero.” Imwe fashoni ndeyokupfeka zvouyanga zvinoratidza mafungiro okupanduka, kushaya mutsigo uye kusazviremekedza.
12, 13. Ndezvipi zvingatitungamirira pakusarudza zvatinopfeka uye nzira yatinozvishambidza nayo?
12 Sevashumiri vaJehovha, zvakakodzera kuti tide kuratidzika zvakanakisisa, izvo zvinoreva kupfeka zvakanaka, zvakachena, zvinoyemurika, uye zvinoenderana nepatinenge tiri. Nguva dzose tinofanira kupfeka zvinoratidza kuti tine “mwero nepfungwa dzakanaka,” izvo pamwe chete ‘nemabasa akanaka’ zvinokodzera munhu, angava murume kana mukadzi, “anoti anotya Mwari.” Chinangwa chedu hachisi chokuti tionekwe nevanhu asi kuti ‘tirambe tiri murudo rwaMwari.’ (1 Timoti 2:9, 10; Judha 21) Chokwadi tinoda kuti chishongo chedu chakanakisisa chive “munhu akavanzika womwoyo . . . , uyo unokosha kwazvo pamberi paMwari.”—1 Petro 3:3, 4.
13 Yeukawo kuti zvitayera zvembatya dzedu uye nzira yatinozvishambidza nayo zvine zvazvinoita pamaonero anoita vanhu kunamata kwechokwadi. Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “mwero,” parinoshandiswa panyaya dzetsika, rine pfungwa yokutya uye kuremekedza manzwiro evamwe kana kuti maonero avo. Saka vavariro yedu ndeyokuisa dzatinoti kodzero dzedu panzvimbo yechipiri tichikoshesa hana dzevamwe. Kupfuura zvose tinoda kukudza Jehovha nevanhu vake tichiratidza kuti tiri vashumiri vaMwari vanoita “zvinhu zvose kuti Mwari akudzwe.”—1 VaKorinde 4:9; 10:31; 2 VaKorinde 6:3, 4; 7:1.
Mapfekero angu anokudza Jehovha here?
14. Kana pava panyaya yekupfeka nekushambidzika, mibvunzo ipi yatinofanira kuzvibvunza?
14 Mapfekero nekuzvishambidza kwatinoita zvinotokosha zvikuru kana tiri muushumiri hwomumunda kana kuti pamisangano yechiKristu. Zvibvunze kuti: ‘Ndinopfeka uye ndinozvishambidza zvekuda kushamisira zvekuti maziso evanhu anenge asisabve pandiri here? Zvinoita kuti vamwe vandinyarire here? Ndinokoshesa kodzero dzangu panyaya idzi here kupfuura kuti ndikodzere kushandiswa pane mamwe mabasa muungano?’—Pisarema 68:6; VaFiripi 4:5; 1 Petro 5:6.
15. Nei Shoko raMwari risingapi mitemo yakanyanya kuwanda pamusoro pemapfekero, kushambidzika, uye utsanana?
15 Bhaibheri haripi vaKristu mitemo yakanyanya kuwanda pamusoro pemapfekero, kushambidzika, uye utsanana. Jehovha haadi kutitorera rusununguko rwedu rwokusarudza kana kutirambidza kushandisa pfungwa dzedu. Asi anoda kuti tive vanhu vakuru, vanoshandisa zvinotaura Bhaibheri uye “vanoita kuti simba ravo rokunzwisisa rirovedzwe kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa nokurishandisa kwavanoita.” (VaHebheru 5:14) Kupfuura zvose, anoda kuti tiite zvinhu zvose zvichibva pakuda Mwari nomuvakidzani. (Verenga Mako 12:30, 31.) Tichishandisa zvataurwa izvi, zvinobvira kuti tive vakasiyana zvikuru mumapfekero uye nzira dzokuzvishambidza nadzo. Kusiyana-siyana ikoko kunooneka pavanhu vaJehovha vanofara vanenge vakapfeka zvinonwisa mvura chero kupi zvako kwavanenge vakaungana pasi pano.
KURAMBA TIINE ZISO “RAKANAKA”
16. Mafungiro enyika anopesana sei nezvakadzidziswa naJesu, uye mibvunzo ipi yatinofanira kuzvibvunza?
16 Mafungiro enyika anonyengera uye anoita kuti vakawanda vafunge kuti mari nezvimwe zvinhu ndizvo zvinovaita kuti vafare. Zvisinei, Jesu akati: “Kunyange kana munhu aine zvizhinji upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.” (Ruka 12:15) Kunyange zvazvo akanga asingarevi kuti vanhu vazviomesere, Jesu akadzidzisa kuti mufaro wechokwadi unowanikwa nevaya “vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu” uye vaya vanoramba vaine ziso “rakanaka,” kureva ziso risina chiringa rinongotarisa zvinhu zvokunamata. (Mateu 5:3; 6:22, 23) Zvibvunze kuti: ‘Ndinonyatsotenda zvakadzidziswa naJesu here, kana kuti ndinonyengerwa “nababa venhema”? (Johani 8:44) Mashoko angu, zvinangwa zvangu, zvinhu zvandinoisa pakutanga, uye mararamiro angu zvinoratidza kuti ndiri munhu worudzii?’—Ruka 6:45; 21:34-36; 2 Johani 6.
17. Taura zvimwe zvakanaka zvinowanikwa nevaya vanoramba vaine ziso rakanaka.
17 Jesu akati, “Uchenjeri hunoratidzwa kuti hwakarurama nemabasa ahwo.” (Mateu 11:19) Chimbofunga zvimwe zvakanaka zvinowanikwa nevaya vanoramba vaine ziso rakanaka. Vanowana zororo rechokwadi muushumiri hwoUmambo. (Mateu 11:29, 30) Havazozvidyi mwoyo zvisina kukodzera uye havazovi nezvakawanda zvinotemesa musoro. (Verenga 1 Timoti 6:9, 10.) Sezvo vachigutsikana nokungowana zvokurarama nazvo, vane nguva yakawanda yokuva nemhuri dzavo uye shamwari dzechiKristu. Izvi zvinovaita kuti varare hope kwadzo. (Muparidzi 5:12) Vanowana mufaro unobva mukupa, vachizviita chero nenzira yavanokwanisa. (Mabasa 20:35) ‘Tariro yavo inowedzerwa’ vonyatsonzwa vakagadzikana uye vachigutsikana. (VaRoma 15:13; Mateu 6:31, 32) Zvechokwadi izvi zvikomborero zvakakura!
KUTORA “NHUMBI DZOSE DZOKUZVIDZIVIRIRA NADZO”
18. Bhaibheri rinotsanangura sei zvakaita muvengi wedu, nzira dzaanoshandisa, uye marwiro atiri kuita?
18 Vaya vanoramba vari murudo rwaMwari vanodzivirirwawo pana Satani, uyo anoda kushayisa vaKristu mufaro, zvose noupenyu husingaperi. (1 Petro 5:8) Pauro akati, “Hatirwi neropa nenyama, asi nehurumende, nevanhu vane masimba, nevatongi venyika verima rino, nemasimba emidzimu yakaipa ari munzvimbo dzomumatenga.” (VaEfeso 6:12) Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti ‘kurwa’ haritauri kuti kurwa kwatinoita ndekwokurwisana tiri kure nokure tiine patakavanda pakachengeteka, asi rinoreva kurwa kwomutsimba. Uyezve mashoko okuti “hurumende,” “vanhu vane masimba,” uye “vatongi venyika,” anoratidza kuti kurwisa kunoita midzimu yakaipa kwakanyatsorongwa uye kuti inoita ichiziva.
19. Tsanangura zvakaita nhumbi dzomuKristu dzokurwa nadzo.
19 Pasinei nekuti tiri vanhu venyama vanokanganisa, tinogona kukunda. Sei? Nokutora “nhumbi dzose dzokuzvidzivirira nadzo dzinobva kuna Mwari.” (VaEfeso 6:13) Ichitsanangura nhumbi idzodzo, VaEfeso 6:14-18 inoti: “Naizvozvo, mirai makasimba, zviuno zvenyu zvakasungwa nechokwadi, uye makapfeka chinhu chinovhariridza chipfuva, chokururama, uye tsoka dzenyu dzakapfeka kugadzirirwa kwemashoko akanaka orugare. Kupfuura zvinhu zvose, torai nhoo huru yokutenda, yamuchakwanisa kudzima nayo zvombo zvinopisa zvinoita zvokukandwa zveakaipa. Uyewo, gamuchirai ngowani [kana kuti tariro] yoruponeso, nebakatwa romudzimu, iro shoko raMwari, muchiramba muchinyengetera mumudzimu nguva dzose nokunyengetera kworudzi rwose nokuteterera.”
20. Kurwa kwedu kwakasiyana papi nekwemasoja chaiwo?
20 Sezvo dzichibva kuna Mwari, nhumbi idzodzo dzokurwa nadzo hadzimbotadzi kutidzivirira, chero bedzi tichigara takadzipfeka. Kusiyana nemasoja chaiwo, ayo angapedza nguva yakareba asina kurwa, vaKristu vari muhondo inongogara iripo yokuti vakabwaira vanogona kufa. Hondo yacho haisi kuzomira kusvikira Mwari aparadza nyika yaSatani uye aisa mugomba rakadzika-dzika midzimu yose yakaipa. (Zvakazarurwa 12:17; 20:1-3) Saka usakanda mapfumo pasi kana uri kuedza kukurira zvaunogara uchikanganisa kana kuti chido chokuita zvakaipa, nokuti tose tinofanira ‘kuzvirwadzisa’ kuti tirambe takatendeka kuna Jehovha. (1 VaKorinde 9:27) Tingatoti tinofanira kunetseka kana tisiri kurwa!
21. Tinogona kukunda chete muhondo yedu yomudzimu kana taita sei?
21 Hatigoniwo kukunda pakurwa uku nesimba redu. Ndokusaka Pauro achitiyeuchidza nezvokukosha kwokunyengetera kuna Jehovha “mumudzimu nguva dzose.” Uyewo, tinofanira kuteerera Jehovha kuburikidza nokudzidza Shoko rake uye kuwadzana nevamwe “varwi” pose patinowana mukana, nokuti hatisi kurwa tiri toga! (Firimoni 2; VaHebheru 10:24, 25) Vaya vakatendeka muzvinhu izvi zvose vachakunda uyewo vachakwanisa kudzivirira zvakasimba kutenda kwavo kana vakadenhwa.
GADZIRIRA KUDZIVIRIRA KUTENDA KWAKO
22, 23. (a) Nei tichifanira kugara takagadzirira kudzivirira kutenda kwedu, uye mibvunzo ipi yatinofanira kuzvibvunza? (b) Inyaya ipi ichakurukurwa muchitsauko chinotevera?
22 “Nokuti hamusi venyika, . . . nyika inokuvengai,” akadaro Jesu. (Johani 15:19) Saka vaKristu vanofanira kugara vakagadzirira kudzivirira kutenda kwavo asi vachizviita nokuremekedza uye nounyoro. (Verenga 1 Petro 3:15.) Zvibvunze kuti: ‘Ndinonzwisisa here kuti nei dzimwe nguva Zvapupu zvaJehovha zvichiita zvinhu zvinopesana noruzhinji? Pandinofanirawo kuita saizvozvo, ndinonyatsogutsikana here kuti zvinotaurwa neBhaibheri uye muranda akatendeka zvakarurama? (Mateu 24:45; Johani 17:17) Uye kana pava pakuita zvakarurama mukuona kwaJehovha, ndakagadzirira uye ndinodada nokuva akasiyana nevamwe here?’—Pisarema 34:2; Mateu 10:32, 33.
23 Zvisinei, kakawanda chido chedu chokuramba takaparadzana nenyika chinoedzwa nedzimwe nzira dzisiri nyore kuona. Somuenzaniso, sezvambotaurwa, Dhiyabhorosi anoedza kukwezvera vashumiri vaJehovha kunyika achishandisa zvinhu zvenyika zvinovaraidza. Tingasarudza sei zvinhu zvinotivaraidza zvakanaka zvinotisiya tazorodzwa uye tiine hana yakachena? Nyaya iyoyo ichakurukurwa muchitsauko chinotevera.
^ ndima 3 Kubvira paPendekosti ya33 C.E., Kristu ndiMambo weungano yepasi pano yevateveri vake vakazodzwa. (VaKorose 1:13) Muna 1914, Kristu akazopiwa simba rokuva mambo ‘woumambo hwenyika.’ Nokudaro vaKristu vakazodzwa iye zvino vanoshanda sevamiririri voUmambo hwaMesiya.—Zvakazarurwa 11:15.
^ ndima 8 Ona bhuku raKukurukurirana Tichishandisa Magwaro, mapeji 249-252, rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
^ ndima 65 Ona Mashoko Okuwedzera, panyaya inoti “Kusaruta Mureza, Kuvhota, Uye Basa Rehurumende.”
Tinofanira Kuva Vatsvene Pane Zvose Zvatinoita
Kuramba kuita zvinopesana nezvinodiwa naMwari, kushumira Jehovha nemwoyo wose uye kudya zvokudya zvikukutu kunotibatsira sei?
Dzidza kuti nei zvichikosha kuteerera inzwi raJehovha uye kutaura naye. Nyaya iyi ichatibatsira kuona kuti tingaita sei kuti Satani uye chivi chatiinacho zvisatitadzisa kuteerera Jehovha.
“Imi Moga Makavimbika”